Vaovao - Fanafihana mivantana ny sehatra voalohany | lanonana famaranana tonga lafatra
Ny tolakandron'ny 23 Mey 2020, Sanxin médical dia nanao fifaninanana kabary tamin'ny “fandraisana ny sehatra ho ivon-toerana” teo amin'ny rihana faha-6 an'ny biraon'ny birao, izay notarihin'i Zhou Cheng, foibe fanamoriana.
Ny seho dia ny zoro fahitana voalohany atrehinay, ary sehatra Taoista ihany koa mba hamakafaka sy hamahana olana. Ity fifaninanana kabary ity dia miompana amin'ny "Scene", mamoaka ireo tantara manodidina antsika ary mizara ny fahatsapana, ny seho, ny olona ary ny zavatra an'i Sanxin. Miaraka andro aman'alina amin'ny sambo iray ihany isika. Tafaray ao anaty saina iray isika ary maharesy ireo zava-tsarotra. Ny olona sanxin dia mampiasa ny fombany manokana handikana ireo fotoana ianarana sy hiarahan'izy ireo mitombo, ilay fo am-boalohany ary miaraka mandroso.
Ny fomban'ny mpandahateny
Ny lanonana loka
. Lanonana fanolorana loka voalohany
. Lanonana fanolorana loka faharoa
. Lanonana fanolorana loka fahatelo
Ceremony Loka fankalazana mari-pankasitrahana
▲ Andriamatoa. Mao Zhiping, tale jeneralin'ny orinasa, namintina ny fifaninanana
Ary farany, nanamafy Andriamatoa Mao Zhiping, mpitantana jeneraly: ity fifaninanana kabary ity dia tsy hetsika fotsiny fa fampiofanana, fifandraisana lalina amin'ireo departemanta sy paositra. Ny "site" dia misy hatraiza hatraiza, miaraka amin'ny tranonkala ho ivon-toerana, ny tanjona ho mpitari-dalana, miankohoka amin'ny vortex centre amin'ny sehatra, ary manindry ny mety ho lanjan'ilay sehatra dia ny fikatsahan'ny olona Sanxin rehetra. Tapitra ny drafitra dimy taona faha-13 amin'ity taona ity. Ny olona sanxin dia tokony haka an'io andro io foana ary miandry tsy hisy miandry ny fotoana. Tokony hiara-hiasa izy ireo hiatrika ny olana, hieritreritra lalina ary hiatrika ireo fanamby. Tokony hiezaka ny hahazo zava-bita amin'ny ezaka izy ireo, ny tombony azo avy amin'ny sehatra ary ny lanja amin'ny ho avy. Mino tanteraka aho fa amin'ny alàlan'ny fanoloran-tenan'ny Sanxin rehetra, afaka manamafy ny antony lehibe indrindra an'ny Sanxin isika tamin'ny taonjato lasa ary manafaingana ny fizotry ny sambo lavitra an'i Sanxin!